> Resource > Talooyin > Sida loo sameeyo a Martiqaad Card xisbiga Engagement shakhsiga Photo
Xisbiyada hawlgelinta Wedding ogolaado in aad si aad ugu dhawaaqdo hawlgelinta in qoyskaaga iyo saaxiibadaa in hab fiican oo waqti isku mid ah xubnaha qoyska iyo saaxiibada ay leeyihiin fursad ay isku bartaan.
Marti xisbiga Engagement lagama maarmaan u ah xisbiga hawlgelinta ah sababta oo ah waxay bixiyaan macluumaad muhiim ah oo ku saabsan xisbiga iyo waa keepsake ah barta leexashada muhiim ah. Waxaad ka iibsan kartaa qaar ka mid ah kaararka martiqaad fiican u qaali ah u soo dirto. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad u soo jiidasho leh oo u gaar ah, waxaad awoodi doontaa inay ka sameeyaan dhacdo in martidaada u Degdagi eegi doonaa weeraryahanka in. Marka aad kaadh ah martiqaad xisbiga hawlgelinta, xusuusnow in ay aad muhiim u ah inaad mid ah shakhsi oo aad u dhigma leh xisbiga.
Si DIY ah marti xisbiga hawlgelinta video, waxaad isticmaali kartaa Wondershare DVD Muqaal dhise si ay kuu caawiyaan. Hadda oo kaliya lacag la'aan ah iyo download raaci hage hoose si aad u bilowdo samaynta adiga kuu gaar ah
Samee Cards Martiqaad xisbiga Engagement la DVD Muqaal dhise
Si fudud u samayn marti xisbiga hawlgelinta video: Dooro foom oo ah in la sameeyo Kaarka ku qasabno
Dejinta sawiro ku darto dareen dheeraad ah oo la xiriira warqadda: Ku dar sawiro aad jeceshahay iyo waxyaabaha la xiriira warqadda
Saamayn qoraal cajiib ah si kor loogu qaado kaarka, qalooca, stretch, qaabka iyo milmaan aad qoraal si xor ah
La wadaag toos ah ama badbaadin sida DVD ah: Print kaarka soo baxay printer ama badbaadin sida sawirka
Sida loo sameeyo ka qaybgalka martiqaadka ah xisbiga video ku qasabno
Tallaabada 1. Ka bilow mashruuc cusub
Ka dib markii ay soo degsado barnaamijka, rakibi oo abuurtaan. Si aad u samayso kaarka martiqaad xisbiga hawlgelinta, waxaad dooran kartaa template ka Standard Mode ah. Si aad uga dhigto in ka badan qofka, waxa kale oo aad bilaabi kartaa laga bilaabo Mode Advanced ah.
Tallaabada 2. Habee Martiqaad Card xisbiga Engagement
Markaas guji "Add Files" button in lagu daro aad sawiro gaar ah ama videos in kaarka. marka aad soo dhoofsadaan sawir / video, saamaynta guurka random si toos ah u codsatay lahaa. Si kastaba ha ahaatee, waxaad iyaga u beddeli kartaa adigoo soo jiiday.
Markaas qorto hawlgelinta haya- martiqaad xisbiga . Dooro file bartilmaameedka oo guji "Edit" button aad qoraal oo ka heli qaar ka mid ah hawlaha qoraalka tafatirka ee xaq u leeyihiin inay wax ka bedel iyo shakhsi wordings aad ku darto.
Talaabada 3: badbaadi ama si toos ah wadaagaan Card Martiqaad ka
Hadda waxa uu aado tallaabada ugu dambeysa, guji "Abuur" oo aad ka arki doonaa interface sida hoos ku qoran. Waxaad sidoo kale waxa ay badbaadin kartaa in qaabab kala duwan, waxa ay wadaagaan on YouTube ama Facebook ama ku gubi in DVD ah.